Apple inoramba ichibhejera pamitambo uye inopa makirasi ekugwinya kune vanogadzira | Ndinobva mac
Hapana mubvunzo kuti WWDC ine zvakawanda kupfuura chirevo chikuru cheMuvhuro wapfuura, Chikumi 4, panguva ino mashopu nehurukuro vachiri protagonists paMcEnery Center muSan José, asi kuwedzera kune iyi Apple inoda kuramba ichikwana avo varipo uye saka wedzera makirasi akasimba mangwanani.
Mune ino kesi ivo vane nyanzvi inozivikanwa yekugwinya nyeredzi Kayla Itsines kubva kuSWEAT izvo zvatinogona kuona mumufananidzo uri pamusoro tichiitisa musangano wekuseni wekusimudzira wevanogadzira vanopinda WWDC. Iyo musangano kutenderera kwechiitiko ichi kunopera China chinotevera uye mushure mezhizha imwe hurukuro ichatamba matiri isu tinotarisira nhau huru maererano ne Hardware.
Kugara muchimiro kwakakosha
Hatikwanise kukanganwa kuti kurovedza muviri kune hutano kune wese munhu uye Apple inoshingirira kutora chishandiso chayo chinosakara, iyo Apple Watch kunhandare yemitambo nenhau dzinonakidza mune inotevera vhezheni yeWOSOS 5, asi kuwedzera pane izvi iwe unofanirwa kuzviisa mukuita uye chii zvirinani chii kirasi yekusimbisa muviri mukamuri imwechete kumutsa muviri uye tanga nesimba.
Isu tinofanirwawo kuyeuka kuti pane dambudziko rakamirira kune vese vanogadzira vanopinda misangano uye kuti zvinoenderana nekupedza zvindori kuti vawane chipo chekufananidzira cheye feat muchimiro chepini, t-shati kana zvakafanana. Mupfungwa iyi, makirasi emafitness akarongwa mangwanani anonyatso kuve akanaka kune vanopinda kuti vakunde mubairo uyu, saka tinogona kungoti vanonakidzwa nawo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoramba ichibhejera pamitambo uye inopa makirasi ekugwinya kune vanogadzira